BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/03/20140အကြံပြုခြင်း
တနသာင်္ရီ မြစ် ကြီးကို ဖျက်ဆီးမဲ့စီမံကိန်းကိုသိန်း ၃၀၀၀နဲ့မလဲသူ
သူက သာမန်မွှေးရှောင်ရွာသား ဒါပေမဲ့
သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်သူ
နာမယ်က ကိုအောင်ဖိုး အလုပ်က လယ်
သူပိုင်တဲ့ မြေဧက ၃၀ ကို ကျောက်မီးသွေး
လုပ်မဲ့ ကုမ္ပဏီက ငွေကျပ် သိန်း ၃၀၀၀
လေးထပ် တိုက်တစ်လုံး ကားအကောင်းစား
တစ်စီး နဲ့ လဲမယ် ဆိုပြီး လာကမ်းလှမ်းချက်
ကို တုံ့ပြန်ချက်က ' ကျုပ် တသက်မှာ ခင်ဗျား
တို့ အခုလာပေး တဲ့ ပမာဏ ကို ကျုပ်
မရှာနိုင်ဘူး ဒါပေမဲ့ ကျုပ်တို့ ရွာသား
တွေ နဲ့ အခု စီးနေတဲ့ တနသာင်္ရီ မြစ်
ကြီးကို ဖျက်ဆီးမဲ့ ခင်ဗျားတို့စီမံကိန်းကို
မလိုဘူး ကျုပ်တို့က လျှပ်စစ်မီး မလိုဘူး
အေးအေးချမ်း ပဲနေချင်တာ ငွေ ကြောင့်
ကိုယ့်ရွာသား ကို ကိုယ်တိုင်ပျက်စီးအောင်
ကျုပ်သေတဲ့ အထိမလုပ်ဘူး ' လို့ ပြော
တော့ ကျောက်မီးသွေး လော်ဘီ တွေလည်း
ကိုအောင်ဖိုးရဲ့ အိမ်ပေါ်က ပြေးရော ။
ဒီလို လူမျိုးတွေ အများ လိုတယ် လေ ။
နိုင်ငံဧ။် အကြပ်အတည်းများကိုဖြေရှင်းကြမည့် ကိုးပွင့်ဆိုင် ခေါင်းဆောင်များအားလုံးကို သိစေအပ်ပါသည်ခင်ဗျား -
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သာမာန်အမျိုးသမီးတယောက်မဟုတ်ပါ ၊
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဧ။် သမီးဖြစ်ပါသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သာမာန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်မဟုတ်ပါ ၊
မြန်မာပြည်ဧ။်အင်အားအကြီးဆုံး အတိုက်အခံပါတီကြီးဧ။် ဥက္ကဌတယောက်ဖြစ်ပါသည် ။
NLD ဧ။် ဥက္ကဌ တယောက်သာမဟုတ်ပါ ၊
ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများအားလုံးက ယုံကြည်လေးစားကြသော ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါသည် ။
မြန်မာပြည်သူများအားလုံးဧ။် လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သာမာန်လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းမဟုတ်ပါ ၊
၁၉၈၈ မှ စခဲ့သော ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲများတလျှောက် ကျောင်းသားပြည်သူ ရဟန်းရှင်လူအများအားလုံးဧ။် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါသည် ။
ထို့နောက် - အ ဆုံး...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ မြန်မာပြည်သူများအတွက်တင်မက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးဧ။် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကပါ တလေးတစားဂုဏ်ပြုကြရသော ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအားလုံးဧ။်အကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက် ခဲ့သော/နေသည့် နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် (သို့) ကမ္ဘာ့စံပြ မီးရှူးတန်ဆောင် ဖြစ်ပါသောကြောင့် -
ပြောသမျှစကား - ဖြစ်လိုသည့်ဆန္ဒ - ကန့်ကွက်ခြင်း ထောက်ခံခြင်း .... အရာအားလုံးတို့မှာ သန်းပေါင်းများစွာသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားများနှင့် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများဧ။်
ဆန္ဒ- စကား နှင့် မဲပြားများပင်ဖြစ်ကြောင်း မေ့လျှော့မသွားမိကြစေရန် အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျား ။
အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုပါကြီး ပုံ မဟုတ်ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူ ငြင်းဆို
ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါဝင်တဲ့ ပုံ ဟာ ကိုပါကြီး ပုံမဟုတ်ဘူးလို့ ဇနီးဖြစ်သူမသန္တာက ငြင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေး ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိုပါကြီး ဓါတ်ပုံ DKBA ငြင်းဆို
အသံဖိုင် - http://burmese.voanews.com/audio/2506043.html
ရုပ်သံ ( DVB ) - http://www.youtube.com/watch?v=XOJqCJ1I-fM&feature=youtube_gdata_player
ဦးဦးလှဆွေကလေ တံတားအောက်က ဇီးသီးတွေပဲ လိုက်ကောက်နေတော့တာပဲ။
ကျပ်သန်း ၆၀၀၀ ကျော် ဇီးသီးဗန်းကြီး ဦးတင့်ဆန်း ခါးပုံထဲ မှောက်ကျသွားတာကျတော့ ဘာမှ မပြောဘူး
သမ္မတကို အလေးပြုဖို့ အစီအစဉ်ရှိမရှိ လွတ်တော်မှာ မေးခွန်းမေးတာလဲ ဦးဦးဘူး ပဲလေ။ အဲတော့ တပ်မတော်ကလည်း သမ္မတက ခံမယ်ဆိုရင် ပြုပါ့မယ်တဲ့။ သမ္မတကလည်း တပ်မတော်က ပြုမယ်ဆိုရင် သူခံချင်ပါတယ်တဲ့။ အဲ့တာနဲ့ပဲ အဲ့သတင်းက မီဒီယာပေါ်က ပျောက်နေချိန်မှာ ...... သမ္မတက ပြည်သူက ပေးထားတဲ့ Emergency ရန်ပုံငွေနဲ့ ကျပ်သိန်း ၃၀၀၀ ဖိုးလောက်ကို ဗိုလ်ရှုခံစင်မြင့် ဆောက် ပြီးပေါ့။ လွတ်တော်လေး ခဏနားတုန်း ဦးတင့်ဆန်းတို့ ဆောက်ချလိုက်တာ။ လွတ်တော်ပြန်စတော့ နောက်တိုးဘတ်ဂျက်တင်ပါလေရော
ကျပ်သန်း ၆၄၀၀ ကျော် တောင် အသုံးပြုဆောက်ထားတဲ့ ဗိုလ်ရှုခံစင်မြင့်ကို နောင်အနှစ် ၆၀ အခိုင်အခံ အသုံးပြုနိုင်ပါစေဗျာာားးးးး
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ လိုက်တွေ ရှယ်တွေ အများကြီးရအောင် ဇီးသီးဗန်းမှောက်တာကို လိုက်ရှာပြတဲ့ အမတ်ကြီးက ဂိုဒေါင်ထဲ ဇီးသီးကွန်တိန်နာလိုက် သိမ်းထားတဲ့ ကံထူးရှင်စာရင်းဝင် ဦးအောင်သောင်းကို ၀င်ဖာတာကတော့ ဖာစိတ် မကုန်လို့ နေမယ်
Koh Tao's case: the story of "hoe" Pol. Maj. Gen. Kiantiphong Khaosamang.
Phabok hire Surat Thani when September 18 after DNA examination results on hoe ...
"The best weapon that was used it would have2type in addition toashovel, and then also haveasolid metal withashovel because the blood matched the DNA of Ms. Hannakhondiao, it is possible that Mr. David hit with this solid is there evidence search carpet""""" พล.ต.ต. the honor he said. "
Police diving picture Find the row that the incident occurred when 19 So yes, they're looking for Granny namai weapons that kill. David moles, fellow. After DNA examination results that just foundashovel of HA/nana//alone.
Sue reported that hoe was found but DNA took several nana//, but when arrested after2days Burma2tok. Make the plan, Myanmar hit David withahoe?//or even phopton by the big press conference on7October. Hoe DNA did not say of David//except some police สื่อ่ฝ่าย andapage to supportanews outlet chafai, there is DNA that David hoe with//
Questions of social security He said that David was killed withahoe// Why is there no dna was not on shift cleaning David hoe? Dna and even spit on my tits-nana also detected. Police General level or an interview that day,//or go diving to find the orchestra played the orchestra played on September 19?? (Translated by Bing)
ပေါက်ပြားမှာ ရှိတဲ့ သွေးအမျိုးအစားကို
ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ ပြီး စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါ
ဟန်နာ ရဲ့ DNA နဲ့တူတယ်လို့သိရတယ် ။
ဒါကြောင့် ဒေးဗစ်ကို သတ်တဲ့
လက်နက် ရေထဲမှာ ရှာတာ မရဖူး ။
နောက်ထက် ၂ ရက်ကြာတဲ့ အခါ မြန်မာပြည်သားတွေကို
လူသတ်မှုနဲ့ ဖမ်းပါတော့တယ် ။
၄၃၆ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ ဗိုလ်မှူး ကျော်စွာဝင်း
ဒီဗိုလ်မှူး က ပြည်သူ့ဘက်တော်သား
ပြည်သူလူထုက ဗိုလ်မှူးကို မသေစေချင်ကြဘူးနော်
အပြစ်မဲ့ လူသတ်နေတာ ရပ်ပါတော့..
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့မှာ မြန်မာသံရုံး အထူး
စုံစမ်းရေးအဖွဲ့၊ စွပ်စွဲခံ တရားခံများရဲ့မိဘတွေနဲ့ အတူ ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကို မျက်နှာချင်း
ဆိုင်ရှင်းလင်းဖို့ ထိုင်း လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ကဖိတ်ကြားခဲ့ပေမယ့် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့
က တက်ရောက် လာခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ရှင်းလင်းပွဲကို ဘန်ကောက်မြို့ ထိုင်းလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးမှာ ဒီကနေ့မွန်းလွဲ
တနာရီကစ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ အခုလိုပျက်ကွက်တာ နှစ်ကြိမ်ရှိပြီ
လို့ ထိုင်းလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ Dr. Nirun Pitakwatchara သတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ - ကျော်ခ၊ ဧရာဝတီ (ဘန်ကောက်မှ ပေးပို့သည်)
ကြည့်လေ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်ရက် လောက်က
သောကြာနေ့က နေပြည်တော်မှာ ထမင်းစားဓါတ်ပုံရိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့
ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်က စနေနေ့မနက်မှာ ဘီလာရုပ်စ်ကို သွားပြီလေ
အင်တာဗျူးတွင် ဦးလှဆွေမှ ဖြေကြားသွားခြင်းဖြစ်သည်
အဘ ဇိုးအောင် ရင်
၀န်ကြီးချူပ် ဆိုက်ကား စီးပြီး ဆိုက်ရောက်လာသည်ကို အိုးစည်ဝိုင်းများဖြင့် သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း သောင်းသောင်းဖျဖျ ၀မ်းသားအားရ ကြိုဆိုနေစဉ် ....
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု နဲ့ပက်သက်ပြီး ၀င်းနှင့် ဇော်တို့ရဲ မိဘများဟာ
DSI ဆိုတဲ့ Department of Special Investigation ကို စစ်ဆေးရာတွင်
ရဲနှင့် စကားပြန်က ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်တဲ့ကိစ္စ ပက်သက်ပြီး တရားမျှတစွာဆောင်ရွက်ပေးရန်
တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး DSI ဟာ ကော့တောင်လူသတ်မှုကို အထူး ကိစ္စတရပ်အနေနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရှေ့နေများကောင်စီက စူရဖုန်ကတော့ DSI ကို ကော့တောင် ကိစ္စ နှင့်ပက်သက်ပြီး ပါဝင်စေလိုခြင်းမှာ ထိုင်းရဲများကို မှားသည် ၀င်းနှင့် ဇော်မှားသည် ဟု ပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ပဲ၊
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူတိုင်းကို လူ့အခွင့်ရေးနှင့်ကာကွယ်ထားပြီး မည်သည့်နိုင်ငံသားအတွက်မဆို တရားမျှတမှု ရှိတယ် ဆိုတာ သေချာစေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟု ပြောသွားပါတယ်။
မိဘများနဲ့အတူ ရှေ့နေကောင်စီနှင့် သံရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များလိုက် အတူတကွ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အောက်ပုံကတော့ DSI တံဆိပ်နှင့် အကြီးဆုံး အမျိုးသမီး စုဝဏ Suwana Suwanjuta.ပုံဖြစ်ပါတယ်။
Ac Bar သူဌေးသားအုပ်နဲ့ဒေးဗစ် ရန်ဖြစ်ပြီး
ဒေးဗစ် အရင်ထွက်လာတယ် ။
ရန်ဖြစ်တုံးက ရှောင်ဝင်ဆွဲတယ် ထင်တယ် ။
ဒေးဗစ် နောက်ကို သူဌေးသားက လူမိုက်တွေကို လိုက်ခိုင်းမယ် ။
Nation TV said
Ac Bar' son group fight David Miller inside Ac Bar .
Ac Bar' son command his Mafia group to follow David Miller
and kill . .
သူဌေးသားက ဖွန်ကြောင်နေတော့ နေခဲ့မယ် ။
ဘားထဲမှာ ဘောလုံးသမားတွေ ရှိတော့
ဟန်နာ တို့ နောက် လိုက်တယ် ။
Ac Bar' son change close and follow Hannah Witheridge.
Than This group rape Hannah Witheridge between big stone .
ဟန်နာ ဆေးမိပြီး သတိလစ်သလို ဖြစ်နေမယ် ။
တည်းခိုခန်းမှာ မုဒိန်းကျင်ဖို့မလွတ်လပ်လို့လား
ဟန်နာက ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ အနားယူရင်း အိပ်ပျော်တာလား
နောက်ဆုံး မသွားပြီး လူမမြင်တဲ့ ကျောက်တုံးကြားမှာ
မုဒိန်းကျင့်မယ်။ မုဒိန်းကျင့်ရင်း ဟန်နာ သတိရလာလို့ 
သေနပ်နဲ့ သတ်လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေ ဆိုက်ရောက်တယ် ။
သေနပ် ဒဏ်ရာ မပေါ်အောင် အနီးက ပေါက်တူးသွားယူပြီး
ထုခြေလိုက်နေတုံး ကျောက်တုံးဆီ ဆင်းတဲ့လမ်းက
လူ အသံတွေကြားရလိမ့်မယ် ။
ဒါနဲ့ ပေါက်ပြားကို ယူပြီး ကမ်းစပ်အတိုင်း ပြေးထွက်ရင်း
ပေါက်ပြားကို ခြံရှေ့ မှာ ထားခဲ့တယ် ။
သူ့သူငယ်ချင်းလိပ်ကျွန်းက ရဲကစာပို့ပေးခဲ့တာ lineကနေ
အန်နာတည်းတဲ့ တည်းခိုခန်းလည်း Acပိုင်ပဲတဲ့ )
သူ့သူငယ်ချင်းပို့ခဲ့တဲ့စာဖတ်ပြတာ Acဘားရဲ့ ညီနဲ့သားပါတယ်
Princess Nway )
ဒေးဗစ်နောက်လိုက်တဲ့ အုပ်စုက ဒေးဗစ် သတိလစ်နေတာကို
သေပြီ အမှတ်နဲ့ လူမမြင်အောင် ကျောက်တုံးကြီးတွေ ကြားက
ပင်လယ်ထဲကို လာပစ်တယ် ။
ကျောက်တုံးလမ်းကြားက ဆင်းလာပြီး တာနဲ့ 
ဒေးဗစ်က လေးတော့ ပစ်ချတယ် ။
အကျီ ဘောင်းဘီချွတ် ပြီး ပင်လယ်ထဲ ပစ်ချလိုက်တယ် ။
တပည့်တွေ ဆိုတော့ တာဝန်ကျေဘဲလေ ။
အခု ၃ ယောက်ထဲက အလယ်ပုံမှာ
အရပ်ရှည်နေတော့ ရှောင်မဖြစ်နိုင်ဖူးလား ။
cctv မှာ ပေါ်နေတဲ့ ပုံက
မျက်မြင်သက်သေတွေက ထိုင်းလူမျိုးပါ ။ ဗဟို ပုလိပ်ဆင်းလာမှ မြန်မာတွေ တရားခံဖြစ်တာ ။
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု ဖြစ်ကာစက အမှတ် ၈ ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ နဲ့နယ်မြေပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီး စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် ။ အမှတ်၈ ရဲတပ်ဖွဲ့ စစ်ဆေးစဉ်က နိူင်ဝေါ်ရဖန် ထိဝိယန် (Ac Bar သူကြီးဟောင်း) သား နိူင်ဝေါ်ရွတ်သို့ ဝိထိယန်( သူဌေးသား ကို လိုက်လံ ရှာဖွေနေပါတယ် ။
မျက်မြင်သက်သေများ ပြောကြားချက်အရ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး နာရီဝက် အကြာမှာ သူဌေးသားက စက်လှေ ငှါးပြီး လိပ်ကျွန်းပေါ်မှ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။
အမှတ် ၈ ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ မှုး အနေနဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့ ဘန်ကောက်မြို့ တော်ကြီးက သူဌေးသားကို ရှာဖွေပြီး DNA စစ်ရန် လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
မနေ့ ကလည်း နိူင်ဝေါ်ရဖန် ထိဝိယန် (Ac Bar သူကြီးဟောင်း)ကို အမှတ် ၈ ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ မှုးက စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် ။
မျက်မြင် သက်သေ တဦး သတင်းပေးချက်အရ အချင်းလူသတ်မှု ဖြစ်သည့် နေ့ က Ac Bar အတွင်းက သူဌေးသားအဖွဲ့ယောကျာင်္းလေး အုပ်စုနဲ့သေဆုံးသူ ဒေးဗစ် ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ် ။
နိူင်ဝေါ်ရဖန် ထိဝိယန် (Ac Bar သူကြီးဟောင်း)က သူ့ အနေနဲ့ဘာမှ မသိ ဘာမှ မမြင်ပါဖူး ။ တာဝန်ရှိ ပုလိပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အဆင်သင့်ပါဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည် ။.
လက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ သသားဖြစ်သူကို ဆက်သွယ်လို့ မရ သေးပါ ဟု ဖြေကြားခဲ့သည် ။
သေသေချာချာပြောနိုင်တာကတော့ လူသတ်မှုမှာ သူဌေးသားပါဝင်ပြီး စက်လှေနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာ တော့ ကျွန်းကို ပိတ်ဆို့ လိုက်ပါတယ် ။
လောလောဆယ် အချင်းဖြစ်ပွားတဲ့ မီတာ ၁၀၀ အတွင်းက ခြေရာ နမူနာ ယူပြီး စစ်ဆေးနေပါတယ် ။ စစ်ဆေးခံရသူတွေ ကတော့ အနီးအနားက လူတွေအားလုံး ဖြစ်ပြီး တံထွေး နဲ့ဆီး ကို DNA တိုင်ကြည့်နေပါတယ် ။
ဇာဂနာ တို့ လဲ တစ်ပတ်တစ်ခါရေးနေရတာ တော်တော် တော့ အကုသိုလ် များတယ်
ခမျ။စဉ်းစားကြည့်လေ။ဘယ်နေရာမှာများ မတော် မတည့်တာတွေ လုပ်နေသလဲ၊
ဘယ်မှာများ မဟုတ် တရုတ် တွေ ဖြစ်နေလဲ၊ ဘယ်သူတွေ မထော် မနှမ်းလုပ်နေ
သလဲ ဆိုတာကို အမြဲ မျက်စေ့ဖွင့် နားစွင့်နေရတာကိုးခမျာ။တစ်ခါမှလဲ နား၇တယ် မရှိပေါင်။ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့် မထော် မနှမ်းလုပ်နေ
တာကိုချည်းတွေ့ နေရတော့တာပါပဲ။သည် အစိုးရကလဲ ဒါမျိုးလုပ်ရတာ ၀ါသနာ
ဒါပေမဲ့ သူ့ ကံကလည်း ကောင်းနေသဗျ။ကြည့်လေ။တစ်မျိုးပြီးတစ်မျုးမ၇ိုးလိုက်ရပုံများ
ခမျ။နဂါးနဲ့ခေါင်းလောင်းအတွဲ၊ပြီးတာနဲ့ ခါကာဘိုရာစီတောင်ပေါ်မှာ လူနှစ်ယောက်
ပျောက်၊ဟော နောက်တစ်ခါ ယိုးဒယားမှာမြန်မာလူငယ်နှစ်ဦး လူသတ်မှု နဲ့ ဖမ်းခံရ၊
ပြီးတော့ မြန်မာ ယူ၁၉ဘောလုံးအသင်းကမ္ဘာ့ဖလားရောက်၊ဟော ခုတော့ ကိုပါကြီး ကိစ္စ ပေါ်လာ။
အားလုံး စိတ်ဝင်စားစရာ၊ရင်ခုန်စရာ၊စိတ်ကုန် စရာ ကိုစုံနေတော့တာပါပဲ။ဒီကြားထဲ
လဲပြောရဲ့ ။ဘယ်သူနဲ့တိုက်ဖို့ တုန်း။ဘယ်နိုင်ငံနဲ့တိုက်ဖို့ တုန်း။လွှတ်တော် ထဲကနေ
ပြီးတော့လဲ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ၄၃၆ ကိုပြင် ဖို့ ဆန္ဒမရှိပါဖူးလုပ်ပြန်
ပါလေရော။မသိလို့ မေးပါရစေနော်။တကယ်မသိလို့ ပါဗျ။အဲဒီ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဘယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေ ကတက်လာကြတာလဲ။ဘယ်သူ က တင်မြှောက်လိုက်တာလဲ။ပြည်သူ တွေ ရဲ့အသည်းကြား မဲ တစ်ပြားမပြောနဲ့
တစ်ဖဲ့ တောင် မရတဲ့သူတွေက ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို ဆန့် ကျင်လော်မာ ပြောလိုက်
ကြတာများ အံ့အား ကိုသင့်ပါရော။ပြည်သူ့ ဆန္ဒ ငါးသန်း ကိုတောင် လစ်လျူရှု
ရဲတယ်နော်။ဘယ် လခ နဲ့ ထမင်းစားနေကြတာပါလိမ့်။ဘယ်သူ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ မိန်းမ
အတွက် ထဘီဝယ်ပေးနေပါလိမ့်။ဘောင်းဘီတို စကတ်တို ၀တ်နေရင်တော့
သိဖူးလေ။တစ်ခါ ပီအာရ် ဆိုတာ ကြီးကလဲ ရှစ်မျိုးပေါင်းချုပ် ထုတ်လာပြန်ပါပကော။
တစ်နေ့ တစ်မျိုး မရိုးစေရဖူးခမျ။အမှန်ကတော့ အစိုးရ တစ်ဖွဲ့ လုံး ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ကိုသိမ်းလိုက်ကြပါလားဟင်။ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေ၊ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတွေ
အားလုံး က ဥိးသိန်းစိန် အစိုးရလောက်ကို ဇာတ် လမ်းဇာတ်ကွက် အမျိုးမျိုး မတီထွင်တတ်ကြရှာပါဖူး။နေတိုး တို့ ပြေတည်ဦးတို့ ထက်ကို ၀န်ကြီးအားလုံး
ကလဲ သရုပ်ဆောင်ကောင်းသဗျ။လာမဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာ အကယ်ဒမီပေးပွဲလုပ်ရင်
အစိုးရတစ်ဖွဲ့ လုံး ကိုသာ ရွှေစင်ရုပ်ထုတွေတန်းစီပေးလိုက်ကြပါတော့လားဗျာ။
ပြည်သူ့ ဆန္ဒ ဆိုတာ သွေးဆေးမဟုတ်ပါဖူးခမျ။နည်းနည်းတော့အဖက်လုပ်ကြပါ။
မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုရင် ဇာ၈နာ တို့ ပြည်သူတွေကထောက်ခံ့ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြ
ပါဖူး။ခုတော့ ဒီလောက်ဟန်ဆောင်ကောင်းနေတာမျိုး ဖြင့် ကြုံဖူးပေါင် ကြုံဖူးပေါင်
လို့ သာ အော်ရတော့မှာပဲ။ပြည်သူတွေမကျေနပ်လို့ထထ ကြွကြွ လုပ်ကြမယ်
ဆိုလဲ အဆိုးတော့မဆိုနဲ့လေ။ယိုးဒယား ကရထြက်တောင် ရမ်းသေးတယ်။
ကိုပါကြီး ကိုသေစေလိုက်ပုံများ ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးကျနေတော့တာပဲ။
သိပေါ နဲ့စုဖုရားလတ် ပါတော် မူတုန်း ကလဲ ကြက်ကလေးငှက်ကလေး လိုဖမ်း
သွားတယ် ဆိုတာမျိုး သုံးနှုန်းခဲ့တယ်နော်။မေ့ နေမှာစိုးလို့ ။အင်္ဂလိပ် က ဖမ်းရုံ
ဖမ်းတာ သေနပ် နဲ့ တော့ ပစ်မသတ်ဖူးခမျ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလို့ 
တံဆိပ်ကပ်တဲ့ (အဆိုးရ)လား(အစိုးမရ)လား အဖွဲ့ ကြီးလက်ထက်ကျမှ နိုင်ငံသား
ဒီလို မျိုး ပစ်ဖို့ သတ်ဖို့ လွှတ်တော် ထဲ ကနေ ဘတ်ဂျက် တွေတိုးတောင်းနေတာ
လား။ဒီလိုမျိုး ပစ်ဖို့ သတ်ဖို့ ၄၃၆ ကိုမပြင်ချင်ဖူး အော်နေတာလား။ဇာဂနာ မြို့ ထဲ
သွားတိုင်းတွေ့တာလေးတစ်ခု သတိရမိပါရဲ့ ။မော်တော် ကားတွေက ကျပ်တယ်
လေ။တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်း ထပ်နေ အောင်ကို ကပ်ပြီး ကျပ်နေတာပေါ့။အားလုံးလဲ ကြုံဖူးမှာပါ။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ တစ်ဖက် ယာဉ်ကြောက ကားဖြစ်ဖြစ်၊ကွေ့ ကား
ဖြစ်ဖြစ်၊ဖြတ်ဝင်ချင်ရင်လေ လက်ညှိုးလေးတစ်ထောင်ထောင် နဲ့ခွင့်တောင်း
တာမျိုး တေါ့ ဖူးကြမယ်ထင်ပါရဲ့ ။လေးစားသမှု နဲ့ ခွင့်တောင်းတာမျိုးလဲရှိသလို၊
ဒီလိုလုပ်ပြရင်တာဝန်ကျေတယ် ဆိုပြီး ပြီးပြီးရော ခွင့်တောင်းတာမျိုးလဲ ရှိပါ
သဗျ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ခွင့်တောင်းတဲ့ ဓလေ့ လေးကတော့ကောင်းပါတယ်။
လွှတ်တော် ထဲက တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တေါရော၊ မင်း အ(ဆိုး)ရ ရော ဇာ၈နာတို့ ပြည်သူတွေကို လက်ညှိုးလေးတော့ထောင်ပြကြပေါ့ဗျာ။
လက်ညှိုး ပဲထောင်ခိုင်းတာနော်။တခြားဟာတွေတော့မထောင်ကြပါနဲ့ ။
ခင်ဗျားတို့ ကအားအားရှိထောင်တတ်လွန်းလို့ ပါ။သေနပ်တို့ ဘာတို့ ပေါ့။
ပြည်သူ့ ဆန္ဒ တကယ် လေးစားရင်လက်ညှိုးလေးတောင် ထောင်ပြပေးကြပါ
လို့ ဇာဂနာ ပြောကြည့်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။တကယ်တော့ဇာဂနာ သိလို့ 
ပြောနေတာမဟုတ်ပါဖူး။လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီး ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြောပြ
လို့ ပါ။ဇာဂနာ ဘာမှ မသိရပါဖူးဗျာ။
၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄
( ပဲ့ တင်သံ ဂျာနယ်ထဲကဆောင်းပါးပါ )
U Htay Tint-------
မျက်မြင်သက်သေတွေက ထိုင်းလူမျိုးပါ ။
ဗဟို ပုလိပ်ဆင်းလာမှ မြန်မာတွေ တရားခံဖြစ်တာ ။
အမှတ် ၈ ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ နဲ့နယ်မြေပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ 
ပူးပေါင်းပြီး စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် ။
အမှတ်၈ ရဲတပ်ဖွဲ့ စစ်ဆေးစဉ်က
နိူင်ဝေါ်ရဖန် ထိဝိယန် (Ac Bar သူကြီးဟောင်း) သား
နိူင်ဝေါ်ရွတ်သို့ ဝိထိယန်( သူဌေးသား ကို
လိုက်လံ ရှာဖွေနေပါတယ် ။
လူသတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး နာရီဝက် အကြာမှာ
သူဌေးသားက စက်လှေ ငှါးပြီး လိပ်ကျွန်းပေါ်မှ
ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။
အမှတ် ၈ ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ မှုး အနေနဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့
ဘန်ကောက်မြို့ တော်ကြီးက သူဌေးသားကို ရှာဖွေပြီး
DNA စစ်ရန် လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
မနေ့ ကလည်း နိူင်ဝေါ်ရဖန် ထိဝိယန် (Ac Bar သူကြီးဟောင်း)ကို
အမှတ် ၈ ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ မှုးက စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် ။
မျက်မြင် သက်သေ တဦး သတင်းပေးချက်အရ
အချင်းလူသတ်မှု ဖြစ်သည့် နေ့ က
Ac Bar အတွင်းက သူဌေးသားအဖွဲ့ 
ယောကျာင်္းလေး အုပ်စုနဲ့သေဆုံးသူ ဒေးဗစ်
ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ် ။
နိူင်ဝေါ်ရဖန် ထိဝိယန် (Ac Bar သူကြီးဟောင်း)က
သူ့ အနေနဲ့ဘာမှ မသိ ဘာမှ မမြင်ပါဖူး ။
တာဝန်ရှိ ပုလိပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အဆင်သင့်ပါဟု
လက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့
သသားဖြစ်သူကို ဆက်သွယ်လို့ မရ သေးပါ ဟု ဖြေကြားခဲ့သည် ။
လူသတ်မှုမှာ သူဌေးသားပါဝင်ပြီး စက်လှေနဲ့ 
ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားပါတယ် ။
နောက်ပိုင်းမှာ တော့ ကျွန်းကို ပိတ်ဆို့ လိုက်ပါတယ် ။
လောလောဆယ် အချင်းဖြစ်ပွားတဲ့ မီတာ ၁၀၀ အတွင်းက
ခြေရာ နမူနာ ယူပြီး စစ်ဆေးနေပါတယ် ။
စစ်ဆေးခံရသူတွေ ကတော့ အနီးအနားက
လူတွေအားလုံး ဖြစ်ပြီး တံထွေး နဲ့ဆီး ကို
DNA တိုင်ကြည့်နေပါတယ် ။
အမျိူးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ်အား နအဖ စစ်အုပ်စု၏ တိုက်ခိုက